ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကို မိန်းကလေးဆန်ဆန်ထိုင်ပြီး စိတ်တိုင်းကျပြန်စစ်နေတဲ့ Ivy လေးရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးကို ပြသလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – Maythadin
ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကို မိန်းကလေးဆန်ဆန်ထိုင်ပြီး စိတ်တိုင်းကျပြန်စစ်နေတဲ့ Ivy လေးရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးကို ပြသလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပေါက်တဲ့အိုး သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲကို ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး.. ပြန်ဆိုတေး သီချင်းများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်. ငယ်စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေချစ်ခဲ့ရတဲ့ အေသင်က ခုဆိုရင်ချစ်စရာသမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သမီးလေးတို့မေမေ ဖြစ်လို့နေပါပြီ..
အေသင်ကို ချစ်လာကြတဲ့ ပရိသတ်များကလည်း အေသင့်သမီးလေး အိုင်ဗီလေးကိုလည်း ဆက်လက်ချစ်လို့နေပြန်ပါတယ်နော်… ခုလို ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း အဖြူအမဲသဲကွဲသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်. အချို့အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ မရပ်တည်ရဲဘဲ တိတ်ဆိတ်နေတာတွေကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းတွေကို ခံခဲ့ရသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲကမှ အေသင်ချိုဆွေကတော့ မိမိရဲ့ ခံယူချက်ကို ရဲရဲတင်းတင်း ရပ်တည်ခဲ့လို့လည်း စကစ ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အေသင်က အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းခဲ့ပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝယူခဲ့ပါတယ်နော်။
အေသင့်မှာနောက်ထပ်ချစ်ရမဲ့ချစ်သူရရှိနေပြီဆိုတာလည်း ပရိသတ်ကြီးလည်း အသိဖြစ်မှာပါနော်… ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင့် အခုလက်ရှိ လက်တွဲဖော်ရဲ့ ချစ်ခင် ဂရုစိုက်ခြင်းတွေကို အပြည့်အဝရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။…
ဒီနေ့လေးမှာလည်း Ivy လေးက ရိုက်ကွင်းမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ပြန်စစ်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…….ပရိသတ်ကြီးလည်း အေသင့်တို့ကိုလည်း ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်…
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ေပါက္တဲ့အိုး သီခ်င္းနဲ႕ ပရိသတ္ေတြၾကားထဲကို ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္စီးရီး.. ျပန္ဆိုေတး သီခ်င္းမ်ားနဲ႕ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို သိမ္းပိုက္ထားသူေလးျဖစ္ပါတယ္. ငယ္စဥ္ကတည္းက ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ ေအသင္က ခုဆိုရင္ခ်စ္စရာသမီးေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သမီးေလးတို႔ေမေမ ျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ..
ေအသင္ကို ခ်စ္လာၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ားကလည္း ေအသင့္သမီးေလး အိုင္ဗီေလးကိုလည္း ဆက္လက္ခ်စ္လို႔ေနျပန္ပါတယ္ေနာ္… ခုလို ရႈတ္ေထြးေနတဲ့ နိုင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအားေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း အျဖဴအမဲသဲကြဲသြားခဲ့ရျပန္ပါတယ္. အခ်ိဳ႕အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ မရပ္တည္ရဲဘဲ တိတ္ဆိတ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေဝဖန္ျခင္းေတြကို ခံခဲ့ရသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။
အဲဒီအထဲကမွ ေအသင္ခ်ိဳေဆြကေတာ့ မိမိရဲ႕ ခံယူခ်က္ကို ရဲရဲတင္းတင္း ရပ္တည္ခဲ့လို႔လည္း စကစ ရဲ႕ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေအသင္က အိမ္ေထာင္ေရးကံမေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ကို အျပည့္အဝယူခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
ေအသင့္မွာေနာက္ထပ္ခ်စ္ရမဲ့ခ်စ္သူရရွိေနၿပီဆိုတာလည္း ပရိသတ္ႀကီးလည္း အသိျဖစ္မွာပါေနာ္… ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ အခုလက္ရွိ လက္တြဲေဖာ္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းေတြကို အျပည့္အဝရရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။…
ဒီေန႕ေလးမွာလည္း Ivy ေလးက ရိုက္ကြင္းမွာ ရိုက္ထားတဲ့ပုံေလးေတြကို စိတ္တိုင္းက် ျပန္စစ္ေနတဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…….ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေအသင့္တို႔ကိုလည္း ခ်စ္ေပးၾကပါအုံးေနာ္…
မတရားလုပ်နေတာကြီးကို သိရက်နဲ့ မျှော်လင့်မိနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာအပြစ်တင်ကြောင်းပြောလာတဲ့ မေမီကိုကို